Mhedzisiro yekudonha kweAfghanistan paWorld Travel uye Tourism indasitiri
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Nhau Nhau » Mhedzisiro yekudonha kweAfghanistan paWorld Travel uye Tourism indasitiri
Afghanistan Kuputsa Nhau • Nhau Nhau • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • LGBTQ • misangano • nhau • vanhu • Dhinda Zviziviso • Kuvakazve • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
IWorld Tourism Network iri kushushikana nemamiriro azvino muAfghanistan. Mutungamiri weWTN Dr. Peter Tarlow ndiye wekutanga wepasirese musangano musangano wekufambisa achipa ongororo yake yekudonha kweKabul uye zvichaitwa nekutora kweTaliban muAfghanistan mukushanya kwenyika.
World Tourism Network Mutungamiri Dr. Peter Tarlow inyanzvi yepasirese muindasitiri yekushanya uye yekushanya uye anorema kuita kuti Kabul awire mumaoko eTaliban sechinetso chikuru chevashandi vepasirese uye vezvekushanya uye nenhengo dzeWorld Tourism Network munyika 128.
Panogona kuve nekusahadzika kushoma kuti vanyori vezvakaitika kare vachakakavadzana nehunhu hweese US neEuropean mazano ku vis-à-vis Afghanistan kwemakumi emakore anouya. Nyika dzinoverengeka dzakaedza kukunda Afghanistan, kubva kuChina chekare kuenda kuBritish, kubva kuRussia kuenda kumaAmerican.
Muzviitiko zvese, Afghanistan yakararama zvinoenderana nemukurumbira wayo se "makuva emambo". Kuwa kwechangobva kuitika kweKabul ndiko chete kuchangoburwa mukukundikana kweWestern uye kubva kune geo-yezvematongerwo enyika maonero, kukanganisa uku kuchanzwika kwemakore kana makumi emakore anotevera.
Izvo hazvifanire kunge zvichishamisa kune chero munhu kuti kukanganisa kwezviitiko mukati memazuva mashoma apfuura, kutanga muna Nyamavhuvhu 14 kunogona kukanganisa nyika yekushanya munzira dzisati dzanzwisiswa kana kufambiswa nevakuru veindasitiri yekushanya.
The aimbova purezidhendi weAfghanistan took mari yakawanda sezvaaigona asati atiza nyika yake, uye maawa MaTaliban asati akwanisa kumumisa. Iye nemhuri yake parizvino vakachengeteka muAud Dhabi uye vakagamuchirwa muUnited Emirates, nzvimbo huru yekufamba uye yekushanya kunzvimbo dzekubatsira. Izvi zvino zvinoparadza zvachose chimiro chisina kusimba chechengetedzo iyo nyika yekumadokero yakanga yavaka muAfghanistan.
Zvakadaro kunyangwe paine zvakawanda zvekuti isu tichafanira kudzidza nezve ichangoburwa yekuAfghanistan, zvakakosha kuti nyanzvi dzezvematongerwo enyika, veruzhinji vakuru vezvematongerwo enyika, uye masayendisiti ekushanya avandudze kunzwisisa kwekuti nyika diki uye "ine hurombo" yakatamba sei, uye inogona mune ramangwana kuenderera mberi kutamba, rakakura basa padanho repasi uye zvakare mukushanya kwepasirese.
Kuti tinzwisise zvinorehwa neKabul debacle, tinofanirwa kuongorora nyika zvese kubva kunharaunda nenzvimbo.
Vatengesi vezvivakwa kazhinji vanotaura kudzokorora kuti kune mazwi matatu chete anoona kukosha kwechinhu chivakwa. Aya mazwi "nzvimbo, nzvimbo nenzvimbo" Mune mamwe mazwi munyika yepasi pekutengesa nzvimbo zvese.
Kusvika padanho rakakura isu tinogona kutaura zvakafanana nezve nyika.
Zvakawanda zveramangwana rerudzi zvinotariswa nekwairi pasi. Semuenzaniso, nyika dzeAmerica, uye United States kunyanya, vakave nemukana wakakura mukuti vakaparadzaniswa neEurope negungwa.
Kushaikwa kweUnited States kwemiganhu ine hukasha zvave kureva kuti US yakave nehumwe hwakanakisa hwatinoti "kusarudzika kwakanaka".
Miganhu yayo yepanyama, sekusiyana nenyika zhinji dzeEurope dzinogara nemiganhu yakawanda padhuze padhuze, yakashanda kwete chete kudzivirira nyika zhinji dzeAmerica kubva pakupinda muchiuto asi kusvika pakatanga Covid zvakare kubva kuzvirwere zvekurapa.
Kunyangwe makore ekupedzisira makumi maviri nemakumi maviri nerimwe akaona kuderera kwenzvimbo iyi nekuda kwekushanya kwevanhu vazhinji uye kushomeka kwehutongi hweUnited States kwechishuwo chekudzivirira muganho wekumaodzanyemba kweUS, musimboti uyu uchiri wechokwadi. Canada yakave nemukana wekuve nemuganhu wakareba nerunyararo neUS izvo zvakatendera Canada kushandisa zvishoma zviwanikwa pazvidziviriro zvemauto.
Afghanistan mamiriro akasiyana zvachose. Rudzi urwu rwakakomberedzwa rwuri mumoyo wevanyori vezvakaitika kare vanodana iyo "" nzira dzesilika ".
Kusvika padanho rakakura idzi ndidzo nyika dziri pamoyo penyika, uye ndimo mune idzi nyika pakaitika nhoroondo yezvehupfumi hwenyika. Afghanistan haingogare pakati pemigwagwa yesirika, asi nyika yacho zvakare yakapfuma zvisingaite muzvicherwa zviwanikwa.
Maererano ne Peter Frankopan ichitsanangura iyo US Geological ongororo inotaura kuti Afghanistan yakapfuma mukubatana, iron, mercury, uye potashi.
Nyika ino zvakare ine akachengetedzwa makuru pane izvo zvinozivikanwa se "zvisingawanzo pasi".
Iyi "pasi" inosanganisira lithiamu, beryllium, niobium, uye mhangura. Nekuwa kweKabul izvi zvicherwa zvisingawanzo uye zvinhu zvakakosha zvave mumaoko aTaliban uye izvi zvicherwa zvine mukana wekuita kuti maTaliban ave akapfuma zvisingaite.
Hatifanire kushamisika kana maTaliban asingashandise iyi mhepo yezvehupfumi senzira yekuenderera mberi nechinangwa chavo chekuumba nyika yeIslamic Califate.
Vashoma vekuMadokero uye kunyange vashoma vashanyi vekushanya vanonzwisisa kukosha kweaya mashoma epasi uye zvicherwa uye nenyaya yekuti China iinewo hukuru hwakawanda hwakawanda hweizvi zvinhu. Isu tinoshandisa zvinhu izvi mune zvese kubva kugadzirwa kwemakomputa kusvika kuTalcum poda.
Kudzora uku pamaminerari asingawanzo uye anodiwa uye pasipasi pasi zvinoreva kuti mubatanidzwa weTaliban-Chinese unova dambudziko nyowani kumarudzi ekumadokero uye nekuwedzera maindasitiri ekushanya.
Kuwa kwaKabul zvakare kune mitengo yezvematongerwo enyika.
Anurag yadav anoti:
Nyamavhuvhu 20, 2021 pa14: 47
Pane zvakawanda zvisina kuziviswa zvematongerwo enyika mune ino chinyorwa kupfuura chero mwenje pane izvo musoro wechivimbiso.
Paul Rogers anoti:
Nyamavhuvhu 19, 2021 pa14: 13
Kufunga kunokanganisa chidimbu & zvakanyatsotaurwa, Peter. Pana PM vachienda nemari yese iyoyo, kune rumwe rutivi ndinobvuma kunyadziswa kwakazara asi kune imwe yacho zvimwe zvirinani iye anayo (uye munhu wese anoziva kuti anayo & anomubata kuti azvidavirire) kupfuura iyo maTaliban anayo, zvirokwazvo?
Ashraf El Gedawy anoti:
Nyamavhuvhu 19, 2021 pa07: 55
Kwaziso dzese kune anoziva uye akakomba nyanzvi yevashanyi pane ino inoshamisa analytical chinyorwa kukurudzira kupunzika kweAfghanistan mumawoko eTaliban, iyo inosimudza sirogani yeIslam pakufamba kwekushanya nekufamba kwenyika.
Deepesh Gupta anoti:
Nyamavhuvhu 19, 2021 pa00: 18
Zvakanaka, kana ukatadza kuita kuti imba yako irambe iri mugwara uye uine huwori Mwariwo haazokubatsiri… ..
Pakanga pasina chinangwa, pasina mauto, kana hutungamiriri chero. Iwe unofanirwa kurwira yako wega hondo pane kupomera vamwe. Inguva yakareba sei iwe yaunobvumidza chero yekune imwe nyika kuti ive iripo munyika yako.